Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hir-Shabeelle oo doortay madaxweynahoodii kowaad - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hir-Shabeelle oo doortay madaxweynahoodii kowaad
October 17, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hir-Shabeelle oo Cali Cabdulaahi Cosoble u doortay madaxweyne. [Sawirka: Facebook]
Jowhar-(Puntland Mirror) Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hir-Shabeelle ayaa doortay madaxweynahoodii ugu horeeyay. Tilaabadaan ayaa imaanaysa labo asbuuc kadib markii la asaasay maamulkaas.
Doorasho lagu qabtay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa baarlamaanka maamul goboleedka Cali Cabdulaahi Cosoble ugu doortay madaxweyne.
Cosoble ayaa helay 61 cod, halka ninkii la tartamayay Maxamed Cabdi Awaare uu helay 36 cod, sida ay si rasmiya galabta oo Isniin ah u iclaamiyeen natiijada kama dambaysta ah guddiga doorashada ee maamulka Hir-Shabeelle.
Dhanka kale, Cali Cabdulaahi Xuseen oo loo yaqiin “Guudlaawe” ayaa loo doortay madaxweyne ku xigeenka Hir-Shabeelle.
Madaxweynaha cusub oo kasoo jeeda gobolka Hiiraan ayaa soo noqday xildhibaan xilligii dowladii kumeel gaarka ahayd ee Cabdulaahi Yuusuf Axmed.
June 27, 2016 Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay wasiirka arrimaha dibada Jamhuuriyada Islaamiga Mauritania